Iche Icheta ahihia na nke mmiri mmiri Rayson
\_ "Ogologo dị mma n'okpuru agba na adịghị mkpụmkpụ ka \_" site na nha \_ "kama ọ na-eme ka ntutu ya dị mma ọzọ, \_" Rantazio kwuru. Ọ bụ na ọ bụghị na ọ bụghị ya ma ọ bụ shag, o kwusiri okwu ike, mana a-enwere obere mbelata n'ihu. Nke a bụ mmezi dị ala nke na-agbadata ihu.
Akụkụ akụkụ ndị a agaghị abụ atụmatụ zuru ezu n'ihi na ha chọrọ ịchọpụta ma ihe ha kwesịrị ekwesị. Studentsmụ akwụkwọ nwere ike ịgafe usoro ahụ ọtụtụ oge tupu ịchọta onye ziri ezi. Mgbe ị na-eji ụlọ akwụkwọ 3D nke na-ebi akwụkwọ, ị na-akuzi ụmụ akwụkwọ otu esi ejikọta faịlụ na ibi akwụkwọ 3D dị mma. Oge dị oke ọnụ ahịa, ọ bụrụ na nwa akwụkwọ ọ bụla na-ebipụta ya iche, nke a ga-ebute oge ọrụ a kariri oge dị mkpa.
Companylọ ọrụ ahụ ga-akwụ ụgwọ $ 2 ka ịwụnye egbugbere ọnụ na mbara ihu tupu izipu ha laghachikwute ya. Mgbe m na-ekwu \_ "tinye egbugbere ọnụ na ukpa na", m na-ekwu, tupu nwa agbọghọ ahụ na-agagharị, ha na-arụ ọrụ ahụ n'ụzọ abụọ dị iche iche. Site n'ebe ahụ, nwa agbọghọ ahụ ga-etinye egbugbere ọnụ ya n'ihe ndị dị ya n'obi, na nke ahụ wee bụrụ onye echiche niile na-agba ume.